Muxuu ka yiri tababare Unai Emery go’aankii uu Laurent Koscielny ku diiday safarka Mareykanka? – Gool FM
(London) 16 Luulyo 2019. Tababaraha Arsenal ee Unai Emery ayaa shir jaraa’id uu kasoo muuqday wuxuu kaga hadlay go’aankii uu Laurent Koscielny isaga diiday inuu qeyb kaga noqdo safarka kooxda ee dalka Mareykanka.
Hadalka tababare Unai Emery ayaa wuxuu imaanayaa kaddib guushii ay Arsenal kaga gaartay kooxda Colorado Rapids 3-0, kulankoodii ugu horeeyay ay isugu diyaarinayaan xili ciyaareedka cusub, kaasoo aanu qeyb ka ahayn magaca Koscielny, maadaama uu isaga iska diiday.
Unai Emery ayaa ka cawday xirfad yarida Laurent Koscielny, kaddib markii uu shaaca ka qaaday inuu kala hadlay 33 jirkan reer France, go’aanka uu kaga soo hor jeestay inuu qeyb ka noqdo safarka kooxda Arsenal ee dalka Mareykanka.
“Waxaan kala hadlay seddex jeer go’aanka uu kaga soo hor jeestay inuu qeyb ka noqdo safarka kooxda Arsenal ee dalka Mareykanka, laakiin wuxuu go’aansaday inuu joogo”.
Si kastaba ha ahaatee saxaafada Ingiriiska ayaa xaqiijisay in xiddiga reer France uu doonayo inuu ka tago magaalada London suuqan xagaaga, sidaasi darteed ma uusan ka qeyb galin safarka kooxda Arsenal ee xaagaagan, wuxuuna ku cadaadinayaa maamulka in loo ogolaado inuu baxo, xili dhamaadka qandaraaskiisa Gunners uu ka harsan yahay mudo dhan hal sano.
Arsenal oo dhaqaatiir u direysa wadanka Brazil si ay caafimaadka u mariyaan Everton Soares - miyey la saxiixdeen?